Margarekha » नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था अहिलेको भन्दा अझ् खराब हुने डब्लुएचओका नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि डा. जोस भ्यानडिलिएर
नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था अहिलेको भन्दा अझ् खराब हुने डब्लुएचओका नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि डा. जोस भ्यानडिलिएर
काठमाडौं : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था अहिलेको भन्दा अझ् खराब हुने भविष्यवाणी गरेको छ।
डब्लुएचओका नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि डा. जोस भ्यानडिलिएरले नेपालमा परिस्थिति अझ् नराम्रो हुने बताएका हुन्। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित अपडेटमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमलाई अन्तरवार्ता दिँदै भ्यानडिलिएरले भनेका छन्, हाम्रो अध्ययनले नेपालमा परिस्थिति अझै नराम्रो हुनसक्‍ने देखाएको छ।’
उनले भनेका छन्, ‘यो सुरुवात मात्र हो। अब निकै नै केसहरू बढ्नेवाला छ। आगामी दिन, हप्ता र महिनामा धेरै नै केसहरू देख्‍ने छौं। परिस्थिति अझै नराम्रो हुनेवाला छ।’
उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाईंमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ,‘कोभिड–१९ को संकटमा सरकारले मात्र सबैकुरा गर्न सक्दैन। यो लडाईंमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’